1. Inona no atao hoe acétate leuprorelin?
2. Leuprolide acetate Leuprolide
3. Ahoana ny fomba fiasan'ny leuprolide acetate
4. Ahoana ny fampiasana leuprorelin acetate?
5. Leuprorelin acetate Dosage sy ny leuprorelin acetate Administration
6. Leuprorelin acetate lafiny fiantraikany
Leuprorelin acetate dia karazana peptide izay ampiasaina miaraka amin'ny zava-mahadomelina hafa mba hitsaboana homamiadana amin'ny lehilahy. Saingy tsy fanasitranana an'io aretina io akory izany fa ny fisorohana azy io dia tsy hiparitaka sy manampy amin'ny fanesorana ny voka-dratsin'ny homamiadana amin'ny vatanao. Leuprorelin dia amidy any Etazonia amin'ny alàlan'ny marika Lupron, ary mety ho any amin'ny firenena samihafa eo ambanin'ny anarana marika hafa.
Ny ankamaroan'ny karazana homamiadana prostate dia miankina amin'ny hormonina testosterone mitombo ary miparitaka ao amin'ny vatanao. Na izany aza, ny vovony Leuprorelin acetate dia miasa amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny famokarana hormonina testosterone ka mahatonga ny fanamorana ny fitomboan'ny sela homamiadana ary ny fanamaivanana ny fanaintainana na ny zava-tsarotra atrehin'ny marary mandritra ny famonosana.
Etsy an-danin'izany, ny Lupron dia ampiasain'ny vehivavy hitsaboana ny soritr'aretin'ny endometriozy, izay matetika antsoina hoe fibroids uterus. Leuprolide acetate sy ny fitondrana vohoka dia tena mampanahy mafy ny vehivavy, aza maka izany zava-mahadomelina izany raha manantena hiteraka ianao nefa azonao atao ny miresaka momba ny dokotera. Lupron dia zava-mahadomelina azo tsindrona izay tokony hitsindrona ny hozatra isaky ny volana 1-6. Ataovy azo antoka foana fa maka ny fatra amin'ny dokotera ianao, fa afaka miofana koa ianao amin'ny fomba hindrana ny tenanao amin'ny fitantanana dosage mora amin'ny fampiononana ny tranonao.
Leuprolide acetate mividy dia azo alaina amin'ny fivarotam-panafody an-tserasera sy ara-batana. Ny vidin'ny acétate leuprolide matetika dia miankina amin'ny toerana hividiananao azy. Na izany aza, tsara foana ny hahazoana fahazoan-dàlana mety amin'ny dokotera matihanina. Tadidio fa ny fananana tafahoatra na fanararaotam-panafody leuprorelin acetate dia mety hiteraka voka-dratsy mahery vaika, ary tokony hohalavirinao ny tsy hitondrana azy. Marary mahery ny homamiadana ary tsy tokony hampidi-doza ianao raha tsy mitsabo azy amin'ny fomba maloto. Miresaha amin'ny dokotera raha te hahalala bebe kokoa momba leuprorelin acetate vovony levitra.
Ny vovony leuprolide acetate dia potona gonadotropin-famotsorana hormonina receptor (GnRHR), ary voaporofo fa tena ilaina amin'ny fampiharana klinika samihafa. Ohatra, amin'ny fikarakarana fibroids bevohoka, homamiadana prostate, puberty precocious afovoany (toe-javatra iray izay mitarika ny ankizy hahatratra ny fahamasinana aloha noho ny nantenany), ary ny endometriosis. Amin'ireo toe-pahasalamana rehetra ireo, ny leuprolide dia azo ampiasaina irery na amin'ny fanafody hafa. Io zava-mahadomelina io dia azo ampiasaina miaraka amin'ny fanafody hafa hitsaboana ny anemia, izay avy amin'ny fibroids uterus.
The fatra amin'ny leuprorelin acetate dia tokony tsindrona amin'ny vatanao amin'ny alàlan'ny hozatra. Ampiasao ny fantsom-panafody insuline U-100 hitantana ny fatranao ary miantoka ihany koa ny fampiasana sy menaka omen'ny mpanamboatra. Raha tsy izany dia tsy maintsy mampiasa fantson-tsarahina hafa ianao, ka ampiasao ny 0.5-mL tokana afa-tsy. Tsarovy fa ny vovony leuprorelin acetate dia tokony afangaro toy ny fanazavan'ilay mpanamboatra alohan'ny hampiasana azy. Ny fikorohana ny vahaolana dia mety tsy hanome anao fifangaroana tsara. Ny fifandraisan'ny leuprolide dia hanampy anao amin'ny fanatontosana ny valinao tadiavinao fa aleo foana amin'ny dokotera.
3. Ahoana ny fiasan'ny leuprolide acetate?
Ny mekanisma acetate leuprorelin dia miankina amin'ny fepetra ara-pahasalamana amin'ny fitsaboana. Ohatra, rehefa ampiasaina amin'ny fitsaboana homamiadana prostate dia mampihena ny famokarana hormonina testosterone, izay manampy ny fitomboana sy ny fihanaky ny sela homamiadana. Na dia vovony Leuprorelin Acetate (74381-53-6Tsy mampiasa fanafody homamiadana ny fampiasana, tsy mampihena ny fanaintainana sy fitomboan'ny sela homamiadana ao amin'ny vatanao. Na izany aza, ny fanafody dia azo alaina irery, fa ny fanafody dia manoroana hiaraka aminy amin'ny fanafody homamiadana hafa hahazoana valiny tsara kokoa.
Na dia tsy ekena ny fampiasana ny vehivavy any amin'ny firenena sasany, dia hita fa mandaitra amin'ny fitsaboana ny endometriosis. Eto, ny fanafody dia miasa amin'ny alàlan'ny famelomana ny famokarana estrogen ao amin'ny vatanao, izay fantatra matetika amin'ny hoe "Fandrokandrano estrogen." Eto, ny mekanika fihetsika acetate Leuprorelin dia mifantoka indrindra amin'ny fampihenana ny estrogen, hormonina izay tompon'andraikitra amin'ny vanim-potoana iainanao. Rehefa manomboka maka ny dosage leuprorelin acetate ianao dia hiakatra ny haavon'ny estrogen mandritra ny herinandro vitsivitsy, aorian'izay dia hidina ny haavon'ny estrogen. Ity dingana ity dia mety hampiato vetivety ny vanim-potoana iainananao, ary vokatr'izany, ny soritr'aretin'ny endometriosis.
Ny leuprorelin acetate cancer dia mifanampy amin'ny ady amin'ny aretina mahafaty ao amin'ny vehivavy. Na dia tsy progesterone sy estrogen aza no anton'ny kansera amin'ny nono, dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fanampiana ny fitomboany sy ny fihanahany izy ireo. Ny famokarana ireo hormonina roa ireo dia azo sakanana amin'ny fomba fandidiana mba hanesorana ny ovaries na ny fitsaboana.
Ny hormonina luteinizing vokarin'ny glandy pituitary no mandrisika ny famokarana progesterone sy estrogen avy amin'ny atody. Ny fampiasana ny leuprorelin acetate dia manakana ny famokarana hormonina luteinizing, noho izany dia mampihena ny haavon'ny estrogen sy progesterone ao amin'ny vatanao. Midika izany fa hihena ny fitomboan'ny sela homamiadana ary manamora ny fametrahana ny homamiadan'ny nono.
Ny fitantanana ny leuprorelin acetate dia azo atao amin'ny fomba roa lehibe amin'ny alàlan'ny tsindrona mivantana na ny vovony, izay matetika amboarina miaraka amin'ny solvent alohan'ny handraisany ny fatra. Ny dokotera no olona tsara indrindra hitondra ny fomba roa fanaontsika, fa rehefa voaofana ianao dia afaka manao izany mora foana ao an-trano.
(1) Ny tsindrona acetate Leuprorelin
Ny tsindrona acetate Leuprorelin dia fanafody maharitra manindrona amin'ny tsindrona amin'ny foibe ary tokony hokarakarain'ny mpitsabo matihanina. Ny tsindrona dia omena indray mandeha isam-bolana na isaky ny volana 3, 4, na 6 volana miankina amin'ny fahasalamanao. Amin'ny lafiny iray, ny tsindrona leuprorelin acetate indraindray dia omena ho fampiatoana efa ela izay fantatra amin'ny anarana hoe (Eligard) izay tsindrona ao amin'ny hozonao isaky ny volana 1, 3, 4, na 6 isam-bolana.
Aorian'ny fizahana fizahana dia manome toro-hevitra anao ny dokotera anao, ary koa hanoratra ny fatra amin'ny peptide tsara indrindra ho anao. Ny fotoana horaisin'ny mpitsabo anao dia ho faritanin'ny mpitsabo anao rehefa avy mandinika ny toetranao ianao. Ny tsindrona matetika dia miovaova amin'ny marary iray mankany amin'ny iray hafa.
(2) Leuprorelin acetate powder reconstitution
Indraindray ianao dia mety manapa-kevitra ny hampiasana ny vovony leuprorelin, izay endrika iray ihany koa an'io poti-batana io izay manampy amin'ny ady amin'ny toe-pahasalamana hafa, araka ny efa voalaza teo aloha. Na izany aza, ny vovony Leuprorelin acetate dia tsy maintsy omanina tsara na averina alohan'ny fametrahana azy ao amin'ny hozatrao. Ny vovony dia tokony hodinihina ary tsy tokony hampiasa filàzan'ny loto. Rehefa manomana ny leuprorelin acetate dia ampiasao ny diluent omen'ny mpanamboatra fanafody. Sariho ao anaty sefona ny vongan-drano fotsy mandra-pahatonga azy mihodina, alao antoka fa mihazona ilay fantsom-bazaha. Atsaharo izao ny manelingelina amin'ny alàlan'ny fanerena tsikelikely ny plunger mandritra ny segondra 8 mandra-pahatongan'ny topita voalohany amin'ny tsipika manga eo afovoan'ny barika. Mandrakizay ny syringe mandritra izany fotoana izany.
Afangaro tsikelikely ny vovony mba hahazoana antoka fa mahatonga ny fampiatoana ronono fanamiana izy io. Raha toa ka tsy nanjavona tanteraka ilay vahaolana ny partigara vovony, tapaho ny fantson-draza mandra-pahalevonan'ny singa rehetra ao. Aza maka dosage raha ny vovony Leuprorelin Acetate (74381-53-6) tsy tafiditra tamin'ny fampiatoana tanteraka. Aorian'ny fanarenana, alao haingana ny habetsaky ny fatrao satria napetraka ao anatin'ny fotoana fohy. Ary aza miato ny fampiatoana izay tsy nampiasaina tao anatin'ny roa ora taorian'ny fanarenana, satria tsy voatahiry ary mety hanimba ny fahasalamanao.
Ny fitantanana ny leuprorelin acetate dia na dia tsindrona aza, ary tokony handray ny fatra-pahasao avy amin'ny dokotera matihanina ianao amin'ny vokatra tsara kokoa. Raha miahiahy ianao fa misy fepetra azonao karakaraina ity vovon-peptida ity, aza mividy mihitsy ary atombohy ny fandraisana azy raha tsy efa mandinika fitsabo anao. Leuprolide acetate mpanamboatra mety manondro ny fatra amin'ny fanafody amin'ny torolàlana momba ny fampiasana, saingy mety tsy ho anao izany.
Tsy mitovy ny vatan'olombelona ary mety ho avo loatra ny fatra sasany hamoahana anao amin'ny fiantraikan'ny leuprolide acetate lafiny hafa na ambany loatra ka tsy mahavita ny valiny tadiavina. Ny dosie acetate Leuprolide dia miovaova ho an'ny olona iray, ary izy ireo koa dia voafaritry ny fepetra tsaboina ary koa ny taonan'ny mpampiasa. Leuprolide acetate dia zava-mahadomelina izay tokony horaisina eo ambany fitarihan'ny dokotera satria mety hampidi-doza izany rehefa diso tafahoatra na overdosed. Ireto misy sasany karazana dosage leuprolide acetate samy hafa ho an'ny toe-pahasalamana samihafa;
Dingana leuprorelin acetate lehibe ho an'ny homamiadana Prostate
Ireto misy fatra isan-karazany izay mety hampifangaro, fa ny dokotera no hisafidy ny mety aminao. Ireto fatra ireto manaraka ireto;
Ny tsindrona 1mg indray mandeha isan'andro
Ny tsindrona 5mg intramuskular izay tokony atao indray mandeha isam-bolana.
Azonao atao koa ny mandeha 22.5 mg izay raisinao indray mandeha isaky ny telo volana.
Misy ihany koa ny fatra tsindrona 30mg nalaina indray mandeha isaky ny efa-bolana.
Ny tsindrona 45mg intramuscular izay alainao indray mandeha isaky ny enim-bolana.
Azonao atao ihany koa ny manapa-kevitra ny handeha ho an'ny 65mg subcutaneous implantite izay somary haingam-pandeha satria ianao hitondra ny fatra indray mandeha isaky ny volana 12 na herintaona.
Ny leuprorelin acetate powder doka amin'ny endometriosis
Ny fatra natokana ho an'ny marary endometriosis dia 3.75mg, izay tokony tsindrona indray mandeha isam-bolana mandritra ny enim-bolana. Misy safidy hafa iray izay ahafahan'ny dokotera manolotra ny 11.25mg, ny tsindrona aminy isaky ny telo volana. Ny vehivavy mandray leuprorelin ho an'ny endometriosis dia tokony handinika ihany koa ny hisian'ny fitsaboana fanoloana ny hormonina, izay mety amin'ny fampihenana ny soritr'aretin'ny vasomotor sy ny fatiantoka mitrandraka vy. Na izany aza, ny fandanjalanjana ny soa azo avy amin'ny fitsaboana dia tokony ho laharam-pahamehana ihany koa rehefa mifidy ny fomba fitsaboana mety.
Doka amin'ny leedioma leuprorelin acetate amin'ny Puberty mialoha
Ny fananana tombo-kase tsy misy vidiny dia toe-javatra iray izay ananan'ny ankizy ny mampiavaka ny olon-dehibe ho an'ny olon-dehibe. Rehefa manomboka ny fahalalahana talohan'ny taona 8 ho an'ny zazavavy sy 9 ankizilahy dia heverina ho precocious izy io. Ny fepetra dia azo fehezina amin'ny alàlan'ny fatra amin'ny leuprorelin acetate dosage. Na izany aza, ny lanjan'ny zaza dia hamaritra ny fatra mety amin'ny fitsaboana ny aretina. Ny fatiantoka fatra dia toy izao manaraka izao;
Matetika ambany noho ny 25kg ny fatra natolotra dia ny tsindrona 7.5mg indray mandeha isam-bolana
Ny zaza milanja 25 ka 37.5 kg dia tokony handray 11.25 indray mandeha isam-bolana.
Ho an'ireo zaza ambonin'iny37.5kg, ny fatra natokana dia ny tsindrona 15mg indray mandeha isam-bolana.
Rehefa maka ny fatran'ny dosage Leuprolide ianao dia tokony hotsapaina ihany koa ny haavon'ny hormonina aorian'ny volana 1 na 2 mba hahazoana antoka fa misy famerenam-bokatra gonadotropin ampy. Ny fizahana ara-pitsaboana tsy tapaka dia hanampy ny dokotera anao hanara-maso ny fivoaran'ny fitsaboana ary koa ny fiatrehana izay mety hiseho mandritra ny vanim-potoana fitsaboana.
Aza adino, ny dokotera no olona mety hametraka dosage Leuprorelin ho an'ny olon-dehibe sy ny zaza aorian'ny fizahana ny toetry ny fahasalamana. Indraindray ianao dia mety atoro anao hanomboka amin'ny fatra ambany, izay azo amboarina amin'ny fotoana aorian'ny fandinihana ny valin'ny vatanao. Leuprolide acetate sy ny fitondrana vohoka dia tsy avela satria mety manimba ny zaza tsy miteraka ny zava-mahadomelina. Nomena torohevitra ny vehivavy tsy handray an'io vovo-peptide io rehefa andrasana na rehefa mikasa ny ho bevohoka tsy ho ela akory.
Amin'ny tranga maro, rehefa mampiasa ny zava-mahadomelina ianao na manaloka zava-mahadomelina, dia hamoaka anao amin'ny fiantraikany ratsy; na izany aza, ny herin'ny vatanao dia indraindray afaka mamaritra ny hamafin'ny vokatry. Toy izany koa no mitranga rehefa tsy manaraka toromarika momba ny dosage ianao rehefa maka leuprorelin acetate. Ny fampitandremana amin'ny leuprolide dia mety miovaova arakaraka ny lafin-javatra maro samihafa, toy ny lanjan'ny vatana sy ny fandeferana amin'ny vatana. Ny mpampiasa sasany dia mahatsapa fiantraikany amin'ny lafiny ratsy na dia rehefa miady amin'ny fihenam-bidy amin'ny leuprolide aza izy ireo nefa ny hafa dia afaka manao dosage avo ary mbola mankafy ny tombontsoa.
Misy ny mahazatra leuprorelin acetate effects izay mety ho tsapa amin'ny mpampiasa rehetra, fa nanjavona miaraka amin'ny fotoana. Ny voka-dratsin'ny fandrosoana dia mampidi-doza, ary rehefa mahatsapa izany ianao dia tokony hampandre ny mpitsabo anao avy hatrany. Amin'ny lafiny iray, misy ihany koa ny fiantraikany tsy fahita firy izay tsy dia fahaizanao miaina mandritra ny fangaro leuprorelin. Ireto avy no vokatr'izany;
(1) Ny fiantraikany mahazatra amin'ny leuprorelin acetate
Manaintaina manodidina ny faritra tsindrona
(2) Ny vokatra leuprorelin acetate mahery vaika
Raha sendra mahatsapa ireto tranga manaraka ireto dia mitadiava fitsaboana haingana haingana araka izay tratranao;
Ny fofonaina tsy miovaova hevitra na haingana
Fahalemena na fikapohana ny tongotrao na ny tananao
Famafana ny hodi-maso
(3) Ny voka-dratsin'ny lafiny leuprorelin acetate
Eo ihany koa ny lafiny lafiny tsy azo ozinina mifandray amin'io zava-mahadomelina io. Henjana anefa izy ireo rehefa mitranga izany. Tokony hampahafantarinao haingana ny dokotera avy hatrany alohan'ny hanaratsy azy. Indraindray dia mitranga noho ny fihoaram-pefy tafahoatra, na ny allergy ary misy azy ireo;
Fitrandrahana ny fivaviana mihoa-pampana ho an'ny mpampiasa vehivavy.
Leuprolide acetate sy diabeta ihany koa dia fiantraikany iray tsy fahita firy mety hitranga. Ny fanafody dia voalaza fa mampitombo ny mety hisian'ny diabeta.
Fatratra ny feo ao amin'ny vehivavy
Ho fehiny dia voaporofo fa fanafody goavana ny leuprorelin acetate rehefa ampiasaina amin'ny fomba ara-pitsaboana. Mandritra izany fotoana izany, ny fividianana leuprolide acetate dia azo alaina ao amin'ny fivarotam-panafody akaiky anao ary azonao atao koa ny manamboatra ny baikonao amin'ireo fivarotana an-tserasera samihafa. Betsaka ny mpanamboatra sy ny mpamatsy acétate leuprolide eny an-tsena ankehitriny, fa azonao antoka foana fa manao ny fikarohana ataonao ianao mba hahazoana vokatra tsara amin'ny vidiny mirary. The vidin'ny acetate leuprorelin miovaova amin'ny mpivarotra iray, ary izany no antony ilanao hanao fikarohana tsara alohan'ny hividianana ny zava-mahadomelina. Na izany aza, aza mandray kansera amin'ny leuprorelin acetate alohan'ny hakana ny fatra mety amin'ny dokotera.
Hira, G., Gao, H., & Yuan, Z. (2013). Ny vokatry ny leuprolide acetate amin'ny asan'ny ovarian taorian'ny cyclophosphamide-Doxorubicin-simika fitsaboana amin'ny marary premenopausal miaraka amin'ny homamiadan'ny nono: vokatry ny andiany faha-II ny fitsapana an-tratrana. Oncology fitsaboana, 30(3), 667.
Köhler, G., Faustmann, TA, Gerlinger, C., Seitz, C., & Mueck, AO (2010). Dokotera ‐ fandinihana mba hamaritana ny fahombiazan'ny 1, 2, ary ny 4 mg dienogest isan'andro ho an'ny endometriosis. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 108(1), 21-25.
Tunn, UW, Gruca, D., & Bacher, P. (2013). Ny enuption leuprorelin acetate depot enim-bolana ao amin'ny homamiadana prostate mandroso: fanombanana ara-pitsaboana. Fitsabahana ara-pitsaboana amin'ny fahanterana, 8, 457.
Johnson, SR, Nolan, RC, Grant, MT, Vidiny, GJ, Siafarikas, A., Bint, L., & Choong, CS (2012). Ny fametrahana ny fihenan-tsakafo amin'ny fihenjanana izay mifandray amin'ny fitsaboana depot leuprorelin acetate ho an'ny ivon'ny fahanterana lehibe. Gazety momba ny jaza sy ny fahasalaman'ny zaza, 48(3), E136-E139.